Saxaafada Soomaaliya oo soo dhoweysay Mooshinka Baarlamaanka UK - Awdinle Online
Saxaafada Soomaaliya oo soo dhoweysay Mooshinka Baarlamaanka UK
February 26, 2020 (Awdinle Online) –Xoghayaha Ururka Iskutaga Saxafiyiinta Soomaaliyeed Ee FESOJ Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa sheegay inay ka war hayaan Warbixinta laga gudbiyey Sharciga Saxaafada Soomaaliya.
Macalimuu waxa uu sheegay inay cid walbo oo arintaan iyo sida looga hortegi karo Saxiix uu ku shaqeeyo Sharcigaan Madaxweyne Farmaajo.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa waxaa ay Baarlamaanka dalkaas u gudbiyeen mooshin ka dhan ah Sharciga Saxaafadda oo ay dhawaan ansixiyeen Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada mooshinka gudbiyey ayaa waxaa ay sheegeen in Sharcigaas uu yahay mid ka hor imaanaya Xurriyadda hadalka,walow aan mooshinkaas la horgeyn Baarlamaanka dalkaas si ay uga doodaan.
Xeerka Baarlamaanka Uk ayaa dhigaya in mooshin kasta ay gudbin karaan 6 ilaa 7 Mudane,kadibna ay xildhibaannada cod u qaadaan in mooshinkaas laga doodo,kadibna lagu dhaqaaqo Go’aanka Xildhibaannada.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in arrintaan ay u ololeeyeen Ururka Saxafiyiinta dalka Ingiriiska ee (AUJ) kuwaas Baarlamaanka Uk ka dhaadhiciyey, iyaga oo walaac ka muujiyey qodobo qaar oo ku jira Sharciga Saxaafadda ay ansixiyeen Baarlamaanka Soomaaliya oo ay sheegeen in uu lidi ku Shaqda Wariyeyaasha Soomaaliyeed.
Dad badan ayaa is weeydiinayay maadaama Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan waxa sababay in Baarlamaanka Uk ay mooshiin ka gudbiyaan sharci ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya,hayeeshee dadka falanqeeya Arrimaha Soomaaliya iyo Caalamka ayaa waxaa ay sheegeen in UK ay kamid tahay wadamada Dhaqaalaha siiya Soomaaliya.
Sharciga Saxaafadda Soomaaliya oo ay ansixiyeen Baarlamaanka labada Aqal ee Soomaaliya ayaa haatan waxaa uu sugayaa kaliya saxiixa Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleAl-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerar lagu burburiyey Xarun ay lehayd Shirkadda Isgaarsiinta Safaricom
Next articleAmar culus oo lagu soo rogay Hotelada Muqdisho & Shirkadaha Dalxiiska